အရင်လို အချဉ်မဟုတ်တော့တဲ့ ခန့်မှန်းဆရာကြီးအိုဝင်ရဲ့ ဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေအတွက် ခန့်မှန်းချက်
September 10, 2021 author one Articles 0
အရင်တုန်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေကို မိုက်ကယ်အိုဝင်ခန့်မှန်းပြီဆိုရင် သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာလောင်း၊ ကျိမ်းသေနိုင်တယ်လို့ အလှောင်ခံခဲ့ရတဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်ကို သိပ်တော့အထင်သေးလို့မရတော့ဘူး။
သူလည်း စစချင်းတုန်းက အထာမနပ်သေးလို့ စိတ်ထင်တာတွေလျှောက်ခန့်မှန်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်းဆရာကျလာတယ်။
နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၃)တုန်းကဆိုရင် တလွဲခန့်မှန်းချက်တွေရှိပေမယ့်လည်း အရင်ကလောက် ပုံပျက်ပန်းပျက်မဖြစ်တော့ဘူး။
ပွဲတိုင်းသာ မှန်အောင်ခန့်မှန်းနိုင်ရင်လည်း အိုဝင် မြန်မာနိုင်ငံလာပြီး ဘိုးတော်လုပ်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။
ပွဲစဉ်(၃)တုန်းကဆိုရင် သူခန့်မှန်းတဲ့ပွဲတွေထဲက မန်စီးတီး-အာဆင်နယ်၊ ဝုလ်ဗ်-မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊ စပါး-ဝက်ဖို့ဒ်၊ နောဝစ်ချ်-လက်စတာပွဲတွေ ပေါက်ခဲ့ပြီး ဝုလ်ဗ်-မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊ နောဝစ်ချ်-လက်စတာပွဲတွေဆို ဂိုးရလဒ်ပါကွက်တိခန့်မှန်းခဲ့တာကတော့ အိုဝင်ကို လေးစားရမယ်။
ဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၄)ကိုတော့ အိုဝင်က အခုလိုခန့်မှန်းထားပါတယ် . . .
ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်-စပါးပွဲမှာ အိုဝင်က (၃)ပွဲဆက်အနိုင်ရထားတဲ့ စပါးအသင်းကိုပဲ ရွေးချယ်ထားပြီး ထုံးစံအတိုင်း (၁-၀)နဲ့ပဲနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်ထားတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ စပါးအသင်း အဲဒီလောက်အထိ ဆက်တိုက်ကြီးနိုင်ပွဲရမယ်လို့ မထင်မိဘူး။
ထားလိုက်ပါ ..အိုဝင်က ဆရာဆိုတော့ သူ့သဘောပဲပေ့ါ။
ရာသီအစမှာပဲ အဆင့်(၂၀)ရောက်နေတဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ သူ့အထက်က နောဝစ်ချ်တို့ရဲ့ပွဲမှာ အိုဝင်က အာကြီးကို (၃)ဂိုးပြတ်နိုင်မယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဂန်းနားတွေ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းရော၊ ခြေစွမ်းပိုင်းပါ အဝီစိရောက်နေပေမယ့် ဒီတစ်ပွဲမှမနိုင်ရင်လည်း အာတီတာ အထုပ်ပိုက်ပြီး လစ်ရမှာဖြစ်လို့ အိုဝင်နဲ့အတူ ရပ်တည်လိုက်ပါတယ်။
လက်စတာ-မန်စီးတီးပွဲမှာတော့ မန်စီးတီးက (၃-၁)ဂိုးနဲ့နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီး ဒါကိုလည်း သဘောတူပေမယ့် အိမ်ကွင်းမာတဲ့လက်စတာကို လက်ရှိချန်ပီယံကြီး အလွယ်တကူနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ သံသယတော့ဖြစ်မိတယ်။
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲမဟုတ်ပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုကြောင့် ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ နယူးကာဆယ်ပွဲမှာတော့ အိုဝင်က အိမ်ရှင်အသင်း (၂-၀)ဂိုးနဲ့နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီး ဒီတစ်ပွဲတော့ ဂိုးရလဒ်ပါ မှန်နိုင်လောက်တယ်။
ချယ်လ်ဆီး-ဗီလာ၊ လိဒ်စ်-လီဗာပူးလ်တို့ပွဲမှာ ချယ်လ်ဆီးက (၃-၁)ဂိုး၊ လီဗာပူးလ်(၂-၁)ဂိုးတွေနဲ့ နိုင်ပွဲယူမယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်ကိုလည်း သဘောတူပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ ..ပွဲခန့်မှန်းတဲ့နေရာမှာ နည်းနည်းဆရာကျလာတဲ့ အိုဝင်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကို အရင်လို ဟာသလုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း သူ့ ခန့်မှန်းချက်တွေ ဘယ်လောက်မှန်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရအောင်လား . . .
Crystal Palace v Tottenham Hotspur (Tottenham Hotspur to win 1-0)
Arsenal v Norwich City (Arsenal to win 3-0)
Brentford v Brighton (Game to finish 1-1)
Leicester City v Manchester City (Manchester City to win 3-1)
Manchester United v Newcastle United (Manchester United to win 2-0)
Southampton v West Ham United (West Ham United to win 2-1)
Watford v Wolves (Wolves to win 1-0)
Chelsea v Aston Villa (Chelsea to win 3-1)
Leeds United v Liverpool (Liverpool to win 2-1)
Everton v Burnley (Everton to win 2-0)
အရင္လို အခ်ဥ္မဟုတ္ေတာ့တဲ့ ခန႔္မွန္းဆရာႀကီးအိုဝင္ရဲ႕ ဒီတစ္ပတ္ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲေတြအတြက္ ခန႔္မွန္းခ်က္
အရင္တုန္းက ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲေတြကို မိုက္ကယ္အိုဝင္ခန႔္မွန္းၿပီဆိုရင္ သူနဲ႔ဆန႔္က်င္ဘက္သာေလာင္း၊ က်ိမ္းေသႏိုင္တယ္လို႔ အေလွာင္ခံခဲ့ရတဲ့ မိုက္ကယ္အိုဝင္ကို သိပ္ေတာ့အထင္ေသးလို႔မရေတာ့ဘူး။ သူလည္း စစခ်င္းတုန္းက အထာမနပ္ေသးလို႔ စိတ္ထင္တာေတြေလွ်ာက္ခန႔္မွန္းတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ နည္းနည္းဆရာက်လာတယ္။
ေနာက္ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္(၃)တုန္းကဆိုရင္ တလြဲခန႔္မွန္းခ်က္ေတြရွိေပမယ့္လည္း အရင္ကေလာက္ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ပြဲတိုင္းသာ မွန္ေအာင္ခန႔္မွန္းႏိုင္ရင္လည္း အိုဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလာၿပီး ဘိုးေတာ္လုပ္ဖို႔ပဲက်န္ေတာ့တယ္။ ပြဲစဥ္(၃)တုန္းကဆိုရင္ သူခန႔္မွန္းတဲ့ပြဲေတြထဲက မန္စီးတီး-အာဆင္နယ္၊ ဝုလ္ဗ္-မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္၊ စပါး-ဝက္ဖို႔ဒ္၊ ေနာဝစ္ခ်္-လက္စတာပြဲေတြ ေပါက္ခဲ့ၿပီး ဝုလ္ဗ္-မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္၊ ေနာဝစ္ခ်္-လက္စတာပြဲေတြဆို ဂိုးရလဒ္ပါကြက္တိခန႔္မွန္းခဲ့တာကေတာ့ အိုဝင္ကို ေလးစားရမယ္။ ဒီတစ္ပတ္ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္(၄)ကိုေတာ့ အိုဝင္က အခုလိုခန႔္မွန္းထားပါတယ္ . . .
ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္-စပါးပြဲမွာ အိုဝင္က (၃)ပြဲဆက္အႏိုင္ရထားတဲ့ စပါးအသင္းကိုပဲ ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး ထုံးစံအတိုင္း (၁-၀)နဲ႔ပဲႏိုင္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စပါးအသင္း အဲဒီေလာက္အထိ ဆက္တိုက္ႀကီးႏိုင္ပြဲရမယ္လို႔ မထင္မိဘူး။ ထားလိုက္ပါ ..အိုဝင္က ဆရာဆိုေတာ့ သူ႔သေဘာပဲေပ့ါ။ ရာသီအစမွာပဲ အဆင့္(၂၀)ေရာက္ေနတဲ့ အာဆင္နယ္နဲ႔ သူ႔အထက္က ေနာဝစ္ခ်္တို႔ရဲ႕ပြဲမွာ အိုဝင္က အာႀကီးကို (၃)ဂိုးျပတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုတယ္။
ဂန္းနားေတြ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းေရာ၊ ေျခစြမ္းပိုင္းပါ အဝီစိေရာက္ေနေပမယ့္ ဒီတစ္ပြဲမွမႏိုင္ရင္လည္း အာတီတာ အထုပ္ပိုက္ၿပီး လစ္ရမွာျဖစ္လို႔ အိုဝင္နဲ႔အတူ ရပ္တည္လိုက္ပါတယ္။ လက္စတာ-မန္စီးတီးပြဲမွာေတာ့ မန္စီးတီးက (၃-၁)ဂိုးနဲ႔ႏိုင္မယ္လို႔ခန႔္မွန္းထားၿပီး ဒါကိုလည္း သေဘာတူေပမယ့္ အိမ္ကြင္းမာတဲ့လက္စတာကို လက္ရွိခ်န္ပီယံႀကီး အလြယ္တကူႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ သံသယေတာ့ျဖစ္မိတယ္။
ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕အေကာင္းဆုံးပြဲမဟုတ္ေပမယ့္ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုေၾကာင့္ ပရိသတ္စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ေနတဲ့ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္နဲ႔ နယူးကာဆယ္ပြဲမွာေတာ့ အိုဝင္က အိမ္ရွင္အသင္း (၂-၀)ဂိုးနဲ႔ႏိုင္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းထားၿပီး ဒီတစ္ပြဲေတာ့ ဂိုးရလဒ္ပါ မွန္ႏိုင္ေလာက္တယ္။ ခ်ယ္လ္ဆီး-ဗီလာ၊ လိဒ္စ္-လီဗာပူးလ္တို႔ပြဲမွာ ခ်ယ္လ္ဆီးက (၃-၁)ဂိုး၊ လီဗာပူးလ္(၂-၁)ဂိုးေတြနဲ႔ ႏိုင္ပြဲယူမယ္ဆိုတဲ့ ခန႔္မွန္းခ်က္ကိုလည္း သေဘာတူပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးေရ ..ပြဲခန႔္မွန္းတဲ့ေနရာမွာ နည္းနည္းဆရာက်လာတဲ့ အိုဝင္ရဲ႕ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြကို အရင္လို ဟာသလုပ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း သူ႔ ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္မွန္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရေအာင္လား . . .
Post Views: 3,878
နယူးကာဆယ်နဲ့ ပွဲမှာ ရော်နယ်ဒိုသာပါဝင်လာရင် (၃)ဂိုးပြတ်နဲ့ နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ လော်ရိုးရဲ့ သုံးသပ်ချက်
မက်ဆီနေရာ ဆက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ ဖာတီကို မန်စီးတီးထံ ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့ ဂျော့မန်ဒက်စ်